Booliska Kenya oo lagu Eedeeyay Beegsiga Soomaalida
Xaafadda Soomaalida ee Eastleigh
Booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay inay jirdileen, kufsadeen ama ay u geysteen xadgudubyo kale ku dhawaad 1,000 qof oo qaxooti Soomaali ah.
Xadgudubyadan ayaa dhacay intii u dhaxeysey bishii November 2012ka ilaa iyo dhamaadkii January 2013ka, sida lagu xusey warbixin ay soo saartay hay’adda u doodad xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch oo maanta oo Arbaca ah la soo bandhigey.
Hay’adda ayaa ugu baaqdey masuuliyiinta Kenya in ay si dhaqsiya ah u bilaabaan baaritaan muuqda oo lagu sameeyo arrintan, sidoo kalena UNHCR ayaan wali si furan uga hadlin arrintan waxaana loogu baaqey in ay diiwaangalin ku sameeyaan xadgudubyada loo geysanaayo dadka qaxootiga ah kuwii hore loogu qeystey iyo kuwa mustaqbalkaba.
Warbixin ka koobneyd 68 bog ayaa sheegtey in ay ciidamada Kenya ugu yeereen qaxootiga ku sugan Nairobi “dhamaantiin waxaad tihiin argagaixiso” sida ay hay’addu ku ogaatey wareysiyo ay la yeelatey 101 dad qaxooti iyo magangalyo doon ah iyo waliba Soomaalida reer Kenya.
Warbixintan waxaa kaloo ay soo warisey oo ay qoraalna ka sameysey sida ay Boolisku u isticmaaleen Bambooyin iyo weeraro kaleba oo ay geysteen dad aan la aqoonin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii, taasoo markii danbana ay dowladdu amartey in qaxootiga magaalada ku sugan ay dib ugu laabtaan xeryihii qaxootiga, taasoo loogu qiil dayaayo in lagu kufsado, lagu jirdilo loogana qaato lacag sharci daro ah.
Warbixinta ayaa Booliska Kenya ku eedaysay inay xireen ku dhawaad 1000 qof, iyaga oo ku sheegay dadka ay dhibaateeyeen in ay yihiin argagaixiso waxaana ay dalbadeen lacag si loo sii daayo.
Dowladda Kenya ayaan wax jawaab ah ka bixin codsi ay ha'yadda HRW kaga codsatey in ay kaga jawaabaan warbixintooda.
Faahfahinta warbixintan ka dhegayso halkan.
Warbixinta Human Rights Watch